Semalt ကျွမ်းကျင်သူ: Shareworthy တွစ်တာပုံကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲ။
တွစ်တာပုံများသည်နောက်လိုက်များပိုမိုရရှိရန်အမှန်တကယ်အထောက်အကူပြုသလား။ သူတို့ကပိုနှစ်သက်, retweets နှင့်ဖျောပွပိုမို reel အတွက်စစ်မှန်တဲ့လား ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီလိုလုပ်ဖို့ကူပေးတဲ့နံပါတ်တွေရှိတယ်၊ tweets pics တွေကအလုပ်လုပ်တယ်။ သို့သော်ဖမ်းမိသည်မှာ pics များသည် shareworthy ဖြစ်ရမည်။
Semalt ၏ဖောက်သည်အောင်မြင်သူမန်နေဂျာ Frank Abagnale ကတွစ်တာတွင်ရှယ်ယာထိုက်သောရုပ်ပုံများဖန်တီးရန်အကြံပေးချက်များကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်။
tweet pics ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြတဲ့ case point လေးခုကိုပြထားပါတယ်။
BufferApp သည်သူတို့၏တွစ်တာအကောင့်ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ နို ၀ င်ဘာလတွင်အချိန်အကြာကြီးလေ့လာခဲ့သည်။ pics ပါ ၀ င်သည့် tweets များသည်ပုံနှိပ်ခြင်းမရှိသောသူများထက် ၁၈% ပိုမိုနှိပ်ခြင်းနှင့် ၁၅၀% ပိုမို retweets ရရှိသည်။
တွစ်တာတွင်ထပ်ခါတလဲလဲပြန်လှည့်ခြင်းအတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေသည့်အချက်များနှင့်မည်သည့်အချက်သည်ထိပ်ဆုံးတွင်ရှိသည်ဟုခန့်မှန်းသနည်း။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ခင်ဗျားတို့မျှော်လင့်ထားသလိုပဲဓာတ်ပုံတွေပါ။ ဓာတ်ပုံများနှင့်ပါသည့် Tweets များတွင် ၃၅% တိုးတက်မှု၊ ဗီဒီယိုများ (၂၈%)၊ ကိုးကားချက်များ (၁၉%)၊ အရေအတွက်ရှိသူများ (၁၇%)၊ hashtags များနှင့် ၁၆% တိုးတက်မှုရှိခဲ့သည်။ သင်ပိုမို retweets များအတွက်ဓါတ်ပုံများနှင့်ကိုးကား mash နိုင်သတိပြုပါ။
Sotrender ဘလော့ဂ်သည်တွစ်တာတွင်နောက်လိုက်အများဆုံးအမှတ်တံဆိပ် ၅၀၀ ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့အလေးပေးမှုက pic.twitter.com, vines, Instagram, Facebook နဲ့ twitpic.com links တွေရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ Vines နှင့် twitpic.com link များသည်ဓာတ်ပုံများနှင့် pic.twitter.com ပါသော ၁၄၁% ထက်ပိုသော retweets များရှိသော်လည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Facebook / Instagram ချိတ်ဆက်ထားသူများသည် ၁၂၂% နှင့် ၈၉% အသီးသီးသော retweets အသီးသီးရရှိခဲ့ကြသည်။
တစ်ချိန်ကဒန် Zarella သည်တွစ်တာ၏တုန့်ပြန်မှုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန် (ကျပန်းကောက်ကောက်) ၄၀၀ ကီလိုတင်ပို့ချက်ကိုဆန်းစစ်ရန်အချိန်ယူခဲ့သည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းပြီးနောက်သူ၏နိဂုံးချုပ်? pics နှင့်အတူ Tweets ၏ retweeted ခံရဖို့ 95% အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်သူများအဆိုအရ tweet pics ၏အကောင်းဆုံးအရွယ်အစားကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Desktop မျက်နှာပြင်တွင် timeline ရှိပုံအားလုံးသည် 506 နှင့် 253 pxs (pixels) ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အချိုးအစား 2: 1 ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဓာတ်ပုံသည်အကွာအဝေးတွင်မကျပါက (၎င်းကိုအထက်တွင်ဖော်ပြထားသည်)၊ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ဖြတ်တောက်ထားသည်။ သို့သော်တစ်စုံတစ် ဦး ကပုံကိုနှိပ်လိုက်လျှင်သူ / သူမသည်အရာအားလုံးကိုကြည့်ရှုသည်။
ဝေမျှထိုက်တန် tweet pics ဖန်တီးခြင်း
၁။ သူတို့ကိုရေစာမှတ်သားခြင်း - ဤအတွက်၊ ပါပလော (အခမဲ့ကိရိယာတစ်ခု) ကိုအသုံးပြုပါ။ လှပသောအကိုးအကားတစ်ခု၊ မေးခွန်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုရိုးရိုးရှင်းရှင်းပုံရိပ်တစ်ခုကိုစတင်ခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ ဘုရားနောက်ခံဓာတ်ပုံဖြင့်အဆုံးသတ်ပါ။
၂။ သင်၏ Instagram နှင့် Facebook ဓာတ်ပုံများကိုမျှဝေပါ။ ဤပလက်ဖောင်းရှိသင်၏နောက်လိုက်များကသူတို့ကိုချစ်လျှင်သင်၏ tweeps သည်လည်းသူတို့ကိုချစ်လိမ့်မည်။
၃။ ဓာတ်ပုံများကို စုပေါင်း၍ ဖန်တီးပါ။ ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုပြောပြရန်ရုပ်ပုံသုံးခုသို့မဟုတ်လေးခုကိုသင်သုံးနိုင်သည်။ ဒါဟာအမြဲအံ့ဘွယ်သောအမှုအလုပ်လုပ်တယ်။
4. Tag ။ Tag ။ Tag ။ လူမှုမီဒီယာကွန်ရက်တွေလိုပဲ၊ Twitter ကသင့်ကိုအခြားသုံးစွဲသူများကို၎င်းရဲ့အားသာချက်ကိုမှတ်သားရန်လည်းခွင့်ပြုတယ်။
၅။ Animated GIF တွေကိုစမ်းကြည့်ပါ။ GIFs သည်ထူးခြားသောအကြောင်းအရာများကိုသင်၏ timeline တွင်ထည့်သွင်းရန်အကောင်းဆုံးနည်းဖြစ်သည်။ Twitter ပေါ်တွင် GIFs သည်အလိုအလျောက်မကစားပါ။ အသုံးပြုသူသည်ကစားခလုတ်ကိုအရင် ဦး စွာနှိပ်ရမည်။